Ireo tantara tantara an-tsary mahafinaritra indrindra
Hevitra momba ny tantara an-tsary
Ny boky 3 fitsangatsanganana tsara indrindra
Ny niandohan'ny literatiora dia mifototra amin'ny karazana adventure. Ireo ekena ankehitriny ho ny asa lehibe indrindra amin'ny literatiora eran-tany dia mitondra antsika amin'ny dia mankany amin'ny loza arivo sy zava-baovao tsy ampoizina. Avy any Ulysses ka hatrany Dante na Don Quixote. Ary ankehitriny ny karazana adventure ...
Boky Clive Cussler 3 tsara indrindra
Raha misy mpanoratra mpanoratra tantara an-tsehatra amin'izao fotoana izao izay mbola mitazona ny karazana fitsangatsanganana ao anatin'ny bestsellers, dia i Clive Cussler. Toy ny Jules Verne maoderina, ity mpanoratra ity dia nitondra antsika namakivaky teti-dratsy mahaliana miaraka amin'ny zava-miafina sy mistery toy ny hazondamosina. Ny marina …
Ireo boky 3 tsara indrindra nataon'i Alberto Vázquez Figueroa
Amiko, Alberto Vázquez-Figueroa dia iray amin'ireo mpanoratra tetezamita ireo, amin'ny heviny hoe namaky azy fatratra aho amin'ny maha mpanoratra fanta-daza amin'ny aventure haingana, fony aho mbola kely. Niverina tany aminy aho vao haingana noho ny bokiny farany Goodbye Mister Trump, izay nanamarinako fa ...
Ilay loza mavo lehibe, nataon'i JJ Benítez
Vitsy ny mpanoratra eto amin'izao tontolo izao manao ny asany amin'ny fanoratana habaka majika toa ny nataon'i JJ Benítez. Toerana iray onenan'ireo mpanoratra sy mpamaky izay misy ny zava-misy sy ny tantara foronina mizara efitrano azo idirana miaraka amin'ny lakilen'ny boky vaovao tsirairay. Eo amin'ny mazika sy ny varotra, eo amin'ny tsy fifanarahana sy ...
Ny fiteny miafina amin'ny boky, nataon'i Alfonso del Río
Tadidiko i Ruiz Zafón. Mitranga amiko isaky ny mahita tantara aho izay manondro ny endrika esoterika amin'ny boky, amin'ny fiteny miafina, ny hanitry ny fahendrena tafangona eny amin'ny talantalana tsy misy farany, angamba any amin'ny fasana boky vaovao ... Ary tsara izany. . Ny eritreritry ny mpanoratra Katalana ...
Zoo Mengele avy amin'i Gert Nygardshaug
Fotoana tsara foana hianarana fahalianana poakaty toa ny "Mengele Zoo", andian-teny natao tamin'ny teny portogey breziliana izay manondro ny korontana na inona na inona, miaraka amin'ny hevitry ny dokotera adala izay namarana ny androny tamin'ny fisotroan-dronono tany Brezila. Eo anelanelan'ny vazivazy mainty sy ny fiheverana ny ...
Vozdevieja, nataon'i Elisa Victoria
Iza no tsy mahatadidy an'i Manolito Gafotas an'i Elvira Lindo? Tsy hoe resaka lamaody bisikileta momba ireo mpihetsiketsika zaza ao anaty boky ho an'ny mpijery rehetra. Fanontaniana fa tsy i Elvira na i Now Elisa, miaraka amin'ny akaiky azy ...
Far Away, nataon'i Hernán Díaz
Tsara hatrany ny mihaona amin'ireo mpanoratra sahy, afaka mandray ny andraikitra milaza tantara isan-karazany, mihoatra lavitra ireo marika voajirika toy ny "manakorontana" na "manavao". Hernán Díaz dia manolotra an'ity novela ity amin'ny maha-freshness tsy azo lavina ny olona iray izay manoratra zavatra iray satria fotsiny, miaraka amina fikasana mandika am-bava sy endrika, magie tuning in ...
Oliver Twist, nataon'i Charles Dickens
Charles Dickens dia iray amin'ireo mpanoratra tantara anglisy mahay indrindra amin'ny fotoana rehetra. Nandritra ny vanim-potoana Victorian (1837 - 1901), ny fotoana niainan'i Dickens sy nanoratany, no nahatonga ny tantara ho karazana literatiora lehibe. Dickens dia mpampianatra mazàna amin'ny fitsikerana ara-tsosialy, amin'ny ...
pejy1 pejy2 ... pejy4 manaraka →